40575 पटक पढिएको
अनार एक वहुवर्षिय, वहुउपयोगि पुनीकेसि(एगलष्अबअभबभ)परिवार अन्तरगतको फल हो । यो अति उपयोगि पौष्टिक तत्वयुक्त फलफूल मानिन्छ । विश्वका विभिन्न उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशिय देशहरुमा अनारको व्यवसायिक खेती हुदै आएको पाईन्छ । युरोपको स्पेन, अफ्रिकाको मोरक्को, ईजिप्ट, एशियाको अफगानिस्थान वेलाचिस्थान,चीन, जापान, तथा संयूक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको पाईन्छ ।
यस्को इतिहाँसलाई हेर्दा अनारको उत्तपत्ति इरानमा भएको मानिन्छ । नेपालको हावापानी तथा माटोको अवस्थालाई हेर्दा अनारको खेति डढेलधुरा, डोटी, आछाम, दैलेख, सुर्खेत, दाँड.,अर्घाखाँचि, पर्वत, नवलपरासि, तनहु, गोर्खा, धादिड., नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीदेखि पुर्वको ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, इलाम सम्म समुन्द्र सतहवाट १८५० मीटर उचाइ सम्मको मध्य पहाडको उपोष्ण हावापानीयुक्त क्षेत्रमा सफलता साथ गर्न सकिन्छ । यस्को स्थानीय जातलाई दारिम भनिन्छ । अनारको खेतीले नेपालमा पनि विस्तारै व्यवसायिक रुप लिन थालेको देखिन्छ ।
अनारखेतीको लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?
अनारलाई न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्मको तापक्रम उपयुक्त होला ?
वातावरणीय हिसाबले अनारको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो ?
अनार खेती समुद्र सतहबाट कति उचाई सम्म गर्न सकिन्छ ?
अनार खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
हावापानीको दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको तर माटोको पि.एच. मापनमा उपयुक्त नदेखिएको जमिनमा अनार खेती गर्ने कुनै उपाय छ?
अनार बगैंचा लगाउन कुन तरिकाले रेखाङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
अनार खेती गर्दा बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
अनारको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाड्ल खन्नु पर्दछ ?
अनारको बिरुवा रोप्दा बिरुवा रोप्ने फ्ल्याक वा प्लान्टिङ्ग बोर्डको किन आवश्यक पर्दछ ?
अनारको बगैंचामा सिंचाई गर्न जरुरी छ ?
अनार खेतीको लागि मलखादको व्यवस्था कसरी गर्न पर्दछ ?
नेपालमा अनारका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ?
अनारमा बिरुवा प्रसारणको लागि कुन विधि अपनाइन्छ ?
अनारको बीउबाट तयार गरिएका बिरुवामा के कस्ता अवगुणहरु हुन्छन् ?
अनारमा सबैभन्दा सफल कलमी विधि कुन हो ?
अनारको कटिङ्ग सार्न के कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ?
अनारको बगैंचामा अन्तरबाली लगाउन सकिन्छ ?
अनार बालीमा काटछाँट र तालिमको आवश्यकता पर्छ ?
अनार फल टिप्ने अवस्था भए नभएको कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ?
अनार भण्डारण कसरी गरिन्छ ?
अनारको सबैभन्दा हानिकारक कीरा कुन हो ?
अनारको पुतलीको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ ?
अनारमा लाग्ने गवारो कीराले कसरी नोक्सान गर्दछ ?
अनारमा लाग्ने गवारो कीराको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ ?
अनारमा लाग्ने मिलीबग कीराको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
अनारमा लाग्ने रोगहरुमा कुन सबैभन्दा हानिकारक छ ?
अनारमा लग्ने यो रोगबाट बच्न कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला ?
अनारको फल फुट्ने अवस्था कसरी श्रृजना हुन्छ?
अनार फलमा देखा पर्ने यस अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?